OPDOn Millaan deemte Xiyyaara Samii keessa adeemuun dorgomu dhisu qabdi !!!
Siyyasi biyya kessa atataman jijirama jira. Diini keenya bayeedha hundi nu garbonfachu barbadu, uni irrati wal lolu male wal irra waan barbadan hin qaban. Kanasi ta'ee sanasi hundi isaan waan irrati wal galan qabu. Inis Oromoon akka hin bilisomne, akka abba biyya hin tane goochuu dha. Oromoo erga kana beeke diinoota kun hundi utuu jiran isaan dhisee Oromoo rakkata ykn garbonfatama akka isaa irrati dhaga darbachuu hin qabu ture. Hanguma feedhe ilee Oromoo yoo wal dhabe Oromoon nu dhiiga tokko, Oromoon bakka hunda jiratu, beekan fi walalan, jaarsi fi jartiin, dhiiri fi dubartiin, Kiristiyan fi Isilami Oromoo hundumatu garbonfatame jira. Oromoon tokko ta'ee diinoota kana falmachuu utuu qaba ture.
OPDOn TPLF irratti qabsa'u fi waraaqsa diinagde gegesuun TPLF mo'achuuf jeechoota nama hawwatanin waan heddun dubatamu isaa Oromoo hundaf ifaa.Kun siiritti qooratame deebi deebisun barbaachisa ture. OPDOn TPLF wallin wal dhabde akka qabdu ifaati beekmadha. Achuma OPDO keessa ini kan TPLF harma hodhee jirachu barbada. Garuu ammo Hassawwan nama haawatan kun TPLF xiifuma jabeesuuf toofta soba OPDOn fayyadama jirtudha waari jeedhanitu caalaa. OPDOn saba Milliona 50 durati akkas dhadate, saba kana sobde TPLF murna bicuu kana angoo irratti tikksuuf kan dubatan yoo ta'ee waan itti dhiphanu hin qabnu. OPDOn ofuma ishee waan ittin qalamtuu qoopheefacha jirti waan ta'ef. OPDOn wagga 27 saba soba turte kun asi irratti haadhabatuu jeete akkuma dubatame sana jeecha Oromoo onnachiisu sanan diina TPLF dura dhabbatani hanga dhumatii utuu falmatani TPLFn Oromoo keessa buqisuu irratti utuu hojeetan yoo mo'ataman ilee du'aa nama du'uu turan. Tigiref toofta qoophessani ittin uummata Oromoo sobaa jiru yoo ta'ee garu sabni Oromoo yoo isaan ajjeese du'aa saree du'uu.
Dogoogori OPDO inni lamaffaan ammoo wagoota 27 darbee TPLF diinagden of ijara yamuu ture waan tokko hin hojeene Oromoo keessa adeemee Meesha waraanaa irra guruu male. TPLF EEFRT fi MEGA ijarte Kubaniya fi Warshaa gurguda 1000 ol ega Maallaqa gurate booda. Daldala biyyati hunda erga dhunfate booda. Warshaa Biirra tokko fi Kubaniya Konkoolata tokko ijaranee TPLF dinagden dorgoomne moona jeechun nama gowomsuu utuu hin tane of gowmsuu ta'aa. Kubaniya TPLF qabdu akka dhaabba tokkoti biyya Addunya kessaati Mootummaa Chaina yoo ta'ee malee kan birran hin jiru. Keenya Biirran yoo warqee homishee ilee jara dorgoomu hin danda'uu. Jarii Daldala Industry, Qoonna, Tajjajila adda addaa fi hojii Hawwasuma Isport dabalate hunda dhunfatani jiru. Kanaafuu OPDOn Oromoon gowomsa jeedhe of gowomsa jira male miillan deemani xiyyaara samii keessa balali'uun dorgoomeen qaqabna jeechun waan fakatuu miti.Furmatii OPDOn qabdu tokkichi qeerroo fi qaree ajjeesisuu dhifte, tooftan saba Oromoo TPLF irratti gurmeesite saba birra gorte Tigire TPLF buqisuu qafa.
OPDOn biyya ala of gurmessa jirtu ilee OPDO biyya keessa irra foyee hin qabdu. OPDOn Atlanta humna guddan of ijaree sun document inni qoophese ammoo hanga kan OPDO biyya keessa ilee kan nama hawwatu miti. Xiifuma iyuu Oromoo gurguruuf Eenyuumaa Oromoo baleesuuf kan kaarroorfate ka'ee fakkata. Utuu ijoollee Oromoo lafti keenya lafee keenya jeete du'aa jirtu. Isaan ammoo wa'ee lafa Oromoo saba fi sablami Ethiopia waliin murteesina jeechuu irra darban Magaalaan Oromiyya sabi horma bayeen keessa jiratuti afaan filaate Afaan hojii goodhata jeechun OPDO biyya sana caalaa mirga Oromoo Atlantati waraqaa fula 10 gutuu seera mirga Oromoo molquu ta'ee argame. Warii kun wara fayyida dhufaf jeecha qabsa'oota keenya biyya jiran mana hidhatii gursise, qabsoo keenya laga jirtu amoo degersa diaspora akka hin argane gosise hoji diina hojeete of duromuuf foolata. Garuu yoo bilisoomne waan barbane hunda akka arganu beekuu qabna.
OPDOn Minisotati ijarameti Alaba Ethiopiantiin DC fi Siyyatelti Habasha Moofa waliin Alaba moofa mirmirsan ilee Hamile qabsa'oota caabsina jeedhan hamilee of isaan cacabsa jiru malee murni nagga qabu siirna baleesuuf wagga 45 irratti qabsa'ee deebisee ijaruuf murtefachuun nama dhukuba isaa fayyuu dadhabe of fanisee of ajjeesuuf murtefate fakkata. Gartun kun ammo Amhara waliin deemne malee 4 killo ga'uu hin dadeenyu jeedhe labsii of irrati labsa, qabsoon hidhannoo deemekirasii hin fiduu, lammiin ijaraman angoo qabachun yakka jeedhe balalefata.
Gartuun Diaspora gudan ammoo Waggoota darban hunda caalisee ta'ee qulquluu akka xaliilaa of goodhe Seera Kiitaaba ququluun Waraaqisa gegese Qaween lolee bilisumma bana jeedhe amana. Qulquluman gariidha, saba ofi bilisoomsuuf yaaduun gariidha, diina kana akkuma inni nu cabseeti cabsinan gariidha. Gartun nu qoofati beeka jeedhu kun haalaa jiru siirti qooratee adeemasa jiru uumata of waan qabatama jiru hubachisuu dhise waan hunda balaleefata, wayee diina qoorachuu dhisee wayee fira isaa ishee xiinno beekuu sana ol gudise odeessa ola. Wayee diina keenya waan tokko odeefannoo ga'aa argata hin jiru. Garuu Qabsoo waga 40 gegeefame keessa harka fudhatan mana ta'aan Kiitaaba Qulquluu irra wa'ee Waraaqisa barsisuun yaadun, umuri hin jiren humna hin qabne lola labsun adeemasa garii miti. Wara lolu danda'uuf haalaa mijeesuu wayya.
Ini biyya keessa jiru ilee waan adeema jiru qalbidhan qoorate, hirira wara wal lolaf qoopha'aa jiran, wara Oromiyaa sama jiran, wara Oromoo ajeessa jiran, wara diinaf basasan jiran siirti waan qabatama qoorate dhoksan haraka lafa jalan wara ala jiranti erge isaan xinxalani akka isaan mediadhan saba barsisan goochuu nu danda'uu turan. Of isaanti soochii diina qooratan maxansuun wara biyya keessaf bala qaba yoo ta'ee waraa biyya ala jiruuf rakko hin qabu, haalaa gariidhan saba keenya ittin barsisu ni dandeenya. Dhaabbilee Oromoo adeemsa isaan akka siirefatan goochuuf nu gargara.
Kanaafu Siirni Garbonfatan TPLF waan yaada jiru waan goochuuf adeemu, Joker ini harkati qabate jiru, akkasuma siirin nafixanya moofan du'ee ture dhaabilee Oromooti hirkatan du'aa ka'uuf adeeman ilee waan isaan yaadan wal hubachisuun adeemasa qabsoo keenyaf bu'aa qaba.
Oromoo waan nuf goochu qabdu:-
1. Oduu qabatama fi dhuga ta'ee akka wal hubatuun kara wal qanamuu waliif dabarsii
2. Oromoo yoomi ilee Habasha hin amanin Hariron ati Habasha waliin gootu deebiyee siin balesa beeki;
3. Oromoo diina lola jiru gargarii malee duban gorte hin waranin;
4. Tokko tane male Oromoo abba biyya goochuu akka hin dandeenye seena Bulatovich Oromoo gorse irra hubadhu;
5. Oganna kee, Hayuu kee, beeka kee tufate Habasha irra waa barachuu yaalun amla gadhe waan ta'eef kee filadhuu;
6. Diina waan hundan lagadhu, qooqoba barabara irra ka'ii, diini yoosi siira adeema, Hanan obasa nara deemi yoo jeete hin deemu yoo suumi obafte male.
7. Diina mana kee dhufe sii garboonfatee irrati tarkanfi feedhe yoo fudhate cubuu hin qabu of irrati waan falmateef.
Kanaafuu Uummani biyya keessa jiru Gowomsa OPDO fi Fakkessa Olola diasporaf utuu gura hin keenin ykn abdii goodhachuu dhisan qabsoo egalan biyuuma keessatti Qeeroo fi Qareen, dhaabileen biyya keessa wal gurmessan oganna of keessa bafatan qabsoo itti fufu qabu. Humni ala dhufe Oromoo bilisomsuu akka hin jire garuu beekuu qabu, isuma abida keessa jirutu abida of irra dhamsuu danda'a, nama galaana guda gama jiru dhufe nara abida dhamasa jeedhe egachuu hin qabu.
Oromiyyan Ni bilisoomti.
Getachew Jigi Demekssa 31/05/2017